ယောဟန်အောင်: ငါ့အတွက် စိတ်ပူစရာ မလိုပါ။ (လိုဆို)
ငါ့အတွက် စိတ်ပူစရာ မလိုပါ။ (လိုဆို)
ကျနော်ကြိုက်မိတဲ့ ဆက် လိုဆို (Sek Loso) ရဲ့ နောက်သီချင်း တပုဒ်ပါ။ ဒီသီချင်းကိုလည်း အခြားသူတွေကရော၊ သူ ကိုယ် တိုင်ကရော အခြားစတိုင် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆိုထားတာ ရှိပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ အနှေးစတိုင်နဲ့ ဆိုတာကို သဘောကျပါတယ်။
မင်းကလေးက ထွက်သွားချင်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရ၊ ငါ့အသည်းနှလုံးတွေလည်း ချိနဲ့လာ
မင်းရဲ့ နှလုံးသားက ပြောင်းလဲသွားတာ သိလိုက်ရ၊ ငါ့မှာလည်း စွမ်းအင်တွေလည်း မကျန်တော့ပါ။
မင်းကလေး ငါ့ဘ၀ထဲ လျှောက်ဝင်လာစဉ်မှာ သုခတွေ ပြည့်စုံခဲ့၊ အရာအားလုံး ပြည့်စုံနေခဲ့
မင်းကလေး ပေးခဲ့သမျှ အားလုံးဟာ ငါ့အတွက် အကောင်းတွေချည်းပါ။ ခုတော့ မင်းကလေးက ထွက်သွားချင်နေပြီ။
မင်းလေးက ပြောလာတယ်။ ငါက လူကောင်းမဟုတ်ဖူးတဲ့။ ခုတော့ နောက်ကျနေခဲ့ပြီတဲ့။
ငါက နှလုံးသားတခုလုံးနဲ့ ချစ်ခဲ့တာပါ။ မင်းထွက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း ငါ့ကို ခွင့်တောင်းစရာ မလိုပါဘူး။
ငါက နှလုံးသားတခုလုံးနဲ့ ချစ်ခဲ့တာပါ။ မင်းက ဘယ်သူ့နောက်ကို လိုက်သွားသွားပါ။ ငါ့ကို ထားပစ်ခဲ့ပါ ရပါတယ်။
ငါ့အတွက် စိတ်ပူစရာ မလိုပါဘူး။
ငါ့အတွက် စိတ်ပူစရာ မလိုပါဘူးကွယ်။
အခြားအဖွဲ့တွေ၊ သူကိုယ်တိုင် ရော့ခ်ပုံစံနဲ့ ဆိုတာကိုတော့ အောက်ပါ လင့်ခ်တွေမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Mai Tong Huong Chan
kae piang roo waa ter dtong gaan jaak bai hua jai chun rerm oorn raeng
Once I found out that you wanted to leave, my heart began to weaken.
kae piang roo waa jai kong ter blian blaeng ree-o raeng kong chun mai mee
Once I found out that your heart had changed, I no longer had any energy left in me.
gor mee ter laew jai chun mee kwarm sook ter keu took took yaang tee chun mee
When you're here, my heart is inahappy state. You are everything to me.
gor tee ter hai maa keu sing tee saen dee dtae maa wun nee ter dtong gaan bai
Everything that you have given me is great. But today you are going to leave.
ter bork waa chun mai dee maa bork dtorn nee mun sai bai
You said that I am notagood man. Telling me now is too late.
gor dtorn tee chun ruk ter kae kreung jai taa ter ja bai gor mai dtong taam
At this point I already love you. If you're have to go, it is not necessary to ask me.
gor dtorn tee chun ruk ter kae kreung jai haak ter mee krai gor ting chun bai dai ler-ee
At this point I already love you. If you've got someone else, then just leave me.
mai dtong huang chun mai dtong huang chun
Don't worry about me. Don't worry about me.
jaak wun nun tee ter dai dern kao maa hua jai chun dtong blian bai
From the day you walked into my life, my heart has changed.
jaak mai ker-ee ruk krai mae piang kreung jai dtae gup ter dtong yorm doi dee
I have never loved anyone, not even half-heartedly. But with you, I'm willing to give all my heart.
When you're here, my heart is inahappy state. You means everything to me.
You said I am notagood man. Telling me now is too late.
At this point I already love you. If you got to go, you don't have to ask me.
mai dtong huang chun na ter
Don't worry about me, my girl...
Posted by Yaw Han Aung at 5:28 AM
Labels: Loso, သီချင်းများ